လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမည်သည့်အတိုင်းအတာများသည်မကျူးလွန်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ (CSBD) နှင့်ဆက်နွယ်သနည်း။ ပိုလန်အမျိုးသားများအတွက်နမူနာတစ်ခုအနေဖြင့် Multidimensional Sexuality Questionnaire (2019) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌တင်သည်
လူ့လိင်၏ဘယ်အရွယ်အစားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder (CSBD) Compulsive မှ Related ပါသလား? ပိုလနျအထီးတစ်နမူနာအပေါ်တစ်ဦး Multidimensional လိင်မေးခွန်းလွှာအသုံးပြုခြင်းလေ့လာမှု (2019)
မှတ်ချက် YBOP: အဆိုပါလေ့လာမှုအထွေထွေလူဦးရေကိုအဓိကအားဖြင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော porn အသုံးပြုသူတစ်ဦးဆေးကုသမှု-ရှာကြံအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ သည်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဒီတစ်ခုကြောင့် compulsive porn အသုံးပြုသူများကဖော်ပြခဲ့သည်:
J ကိုလိင် Med ။ 2019 ဇွန် 13 ။ pii: S1743-6095 (19) 31177-4 ။ Doi: 10.1016 / j.jsxm.2019.05.006 ။
Kowalewska E ကို1, Kraus SW2, Lew-Starowicz M က3, Gustavsson K သည်4, Gola M က5.
လူ့လိင်ထိုကဲ့သို့သော Self-လေးစားမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အသိပညာနှင့်အခြားသူများသူတို့ကိုဆက်သွယ်ဖို့စွမ်းရည်အဖြစ်အများအပြားအချက်များ, ဆက်စပ်သောတစ် multidimensional ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်။
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (CSBD) မကြာသေးမီကရောဂါများခွဲခြားများနိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး၏ 11th edition အတွက်ထည့်သွင်း -a လက်တွေ့ရောဂါများအတွက်ကုသမှုရှာကြံလူနာများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများဆန်းစစ်ရန်။
ကျနော်တို့ပိုလန်ယေဘုယျလူဦးရေထဲကနေ 72 ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ CSBD များအတွက်ကုသမှုရှာကြံ 208 ပိုလန်ယောက်ျားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများစုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။
အဆိုပါ Multidimensional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာ-PL လူ့လိင်၏ 12 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ဆနျးစစျဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ CSBD လက္ခဏာတွေ၏ပြင်းထန်မှုစမ်းသပ်ခြင်း-PL ပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ပြင်းထန်မှုအကျဉ်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Screener ဖြင့်တိုင်းတာခဲ့သည်။
ရလဒ်များ CSBD လူနာ (ယေဘုယျလူဦးရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအခါ) မြင့်မားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျရောဂါ, ပြင်ပလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမျိုးကိုကြောက်ရွံ့ပြကြောင်းပြသပါ။ ထို့အပွငျ CSBD ပြင်းထန်မှုအဆိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးစားမှု, ပြည်တွင်းရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဏ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုထားပါသည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အထက်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာ၏ချွတ်ယွင်းလက်တွေ့အလုပ်နှင့် CSBD အပေါ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများစဉ်အတွင်းအာရုံစူးစိုက်မှုခိုင်လုံကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒီလေ့လာမှုကလိင်ကွဲအဖြစ် Self-ဖော်ထုတ်အများစုမှာယောက်ျား, ကန့်သတ်ခဲ့သည်။ အနာဂတ်သုတေသနအမျိုးသမီးများနှင့် Non-လိင်ကွဲဖော်ထုတ်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သည်သငျ့သညျ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးစားမှု, ဝိညာဏ်, ဆိုထားပါသည်, စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ပြည်တွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်လေ့ CSBD တစ်ဦးချင်းစီအကြားထိခိုက်နေကြသည်နှင့်စနစ်တကျလက်တွေ့အင်တာဗျူးနှင့်ကုသမှုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုစဉ်အတွင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
KEYWORDS: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder; လူ့လိင်; Multidimensional လိင်မေးခွန်းလွှာ; စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု
Doi: 10.1016 / j.jsxm.2019.05.006